Taariikhda gabadhii ugu horeysay ee Hindiya ka noqotay sawir qaade - BBC News Somali
Image caption Ms Vyarawalla iyo kaamiradeeda
Magaceedu waa Homao Byanrawalla, waxa ay taariikhda ku gashay in ay noqotay haweenaydii ugu horeysay oo sawir qaade ka noqotay dalka Hindiya , iyada oo sawirro ku diiwaangalisay hanaankii ay Hindiya xornimada kaga qaadanaysay Ingiriiska.
Image caption Sawirradii ay qaaday ee ugu horeeyay sanadii 1930-kii
Layligii ugu horeeyay oo ay sawirro ku qaaddo , kuwaas oo lagu soo daabacay wargeys maxali ah, waxayna ku shaqo gashay sidii sawir qaade madax banaan.
Sawirradeeda ayaa xiiso gaar ah yeeshay kadib markii muuqaalo ay ka qaadday nolosha magaalada Mumbai lagu soo daabacay majalladda Illustrated Weekly.
Image caption Koox kalkaalisooyin tabobar ku jira oo madadaalo samaynaya
Reerkooda waxa ay magaalada Delhi u guureen sanadkii 1942-dii, halkaas oo shaqo laga siiyay Laanta Warbaahinta British.
Iyada oo ka mid ah sawir qaadayaasha ayaa waxaa la arki jiray iyada oo baaskiin ku dhex maraysa magaalada Dehli, wadatana maakiradeeda.
Image caption Sawir ay qaadday 1940 Delhi
Sawirradii ugu quruxda badnaa, uguna saamaynta badnaa ayaa waxa ay qaadday kadib xoriyaddii Hindiya, bixitaankii gumeystihii Ingiriiska iyo waliba tacsiyadii Muhatma Gandhi iyo Ra'isulwasaarihii hore Jawaharlal Nehru.
Image caption Lord Mountbatten mid ka mid ah maamuleyaashii Ingiriiska oo fardo ku tagaya baarlamaanka 15 August 1947
Image caption Hindiya oo u dabaaldegaysa maalinta jamhuuriyadda 26 Janaayo 1950 , Delhi
Ms Vyarawalla waxa ay sawir ka qaaday hoggaamiyeyaashii ugu caansanaa ee xoriyadda Hindiya.
Balse waxa ay sheegtay in ay ka shalaysay maadaamaa ay sawir ka qaadi weysay kullankii lagu dili doono Mahatma Gandhi. Waxa ay sheegtay in iyada oo kulanka kusii socota in uu ninkeeda ugu yeeray shaqo kale.
Image caption Mahatma Gandhi (bidix) iyo mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii xornimo u doodka Khan Cabdul Qafaar (Midig) oo ka qeybgalaya shirkii lagu go'aamiyay kala go'a Hindiya iyo Pakistan
Waxa ay sidoo kale sawirro ka qaaday dadkii caanka ahaa ee soo booqday Hindiya waxyar kadib xornimaddii, waxaana ka mid ahaa Ra'isulwasaarihii Shiinaha Zhou Enlai, hoggaamiyihii Nietnam Ho Chi Minh, boqaradda Ingiriiska Elizabeth II iyo madaxweynihii Maraykanka John F Kennedy.
Image caption Boqoradda Elizabeth oo joogto carwo dharka lagu soo bandhigo, Delhi sanadkii 1961
Image caption Ra'isulwasaarihii Hindiya Jawaharlal Nehru oo sigaar u shidaya xaaska nin dublamaasi British ah diyaarad dusheed.
Waxa ay waraysi ku sheegtay in ay barooratay markii ay maqashay geerida Nehru.
Image caption Mr Nehru iyo walaashiis Vijayalaxmi Pandit